မူကွဲ - Harley Street Clinic London ပုဂ္ဂလိကစမ်းသပ်ဆေးရုံများ
စက်တင်ဘာလအထိ 2021 နီးပါး 70% UCL လူနာများတွင် COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့သော Mu variant ရှိသည်.
ဒီအပတ်အတွင်းမှာ UCL ရဲ့အဆိုအရ, Epsilon မူကွဲသည်ပမာဏထက်ပိုများသည် 80% ယူအက်စ်တွင်ဖြစ်ပွားမှုအသစ်များ. ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်မျိုးစိတ်အသစ်များသည်ပိုမိုကူးစက်လွယ်သောကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုကူးစက်လွယ်သည်ဟုဆိုသည်။.
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းနည်းသောရပ်ရွာများတွင်, အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသများတွင်စောင့်ရှောက်မှုရရှိနိုင်သောအကန့်အသတ်ရှိသည်, Mu မူကွဲသည် ပို၍ ပင်ထိခိုက်စေနိုင်သည်. COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုလက်လှမ်းမမီသောဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင်ဤအရာအားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်သည်. ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့နောင်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာခံစားရနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်.
“ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေ,“ ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားတဲ့လူတွေဟာ COVID-19 ကူးစက်ခံရတယ်, ရှားပါးနေဆဲဟုယူဆကြသည်, Mu နှင့်ပင်, UCL အရ, ဒါပေမယ့်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူမှာပိုးရှိရင်, သူတို့ကဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်နိုင်တယ်. (UCL သည်ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲအောင်မြင်နေသောလူနာများတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုရှိမရှိအချက်အလက်များဆက်လက်အကဲဖြတ်နေသည်။)
Mu မူကွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သောအချက်ငါးချက်.
1. Mu သည်အခြားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများထက်ကူးစက်လွယ်သည်.
3. Mu သည် 'hyperlocal ဖြစ်ပွားမှုများ' သို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်။’
4. Mu Variant အကြောင်းလေ့လာရန်နောက်ထပ်ရှိသေးသည်.
5. ကာကွယ်ဆေးသည် Mu Variant အားအကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်သည်.
Mu Variant မှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်သင်အရေးကြီးဆုံးအရာသည်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝရရှိရန်ဖြစ်သည်, ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်. ဤအချက်မှာ, ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် Pfizer သို့မဟုတ် Moderna ကဲ့သို့ကာကွယ်ဆေးနှစ်လုံးထိုးလျှင်ဆိုလိုသည်, ဥပမာ, သင်ရိုက်ချက်နှစ်ခုလုံးကိုရယူပြီးထိုရိုက်ချက်များအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်အကြံပြုထားသည့်နှစ်ပတ်တာကာလကိုစောင့်ရပါမည်.